Hiran State - News: R/wasaare Farmaajo iyo qaar golahisa wasiirada ka tirsan maxaa kala heysta?
R/wasaare Farmaajo iyo qaar golahisa wasiirada ka tirsan maxaa kala heysta?
Mogdisho: (hiranstate.com)-R/wasaare Farmaajo oo aad ugu faraxsanaa xiligii loo magacaabay inuu shacabka Somaliyeed u noqdo wasiirka 1aad ayaa isaguna soo dhisay wasiiro u badan qurbo joog isagoo tixgalinayo nidaamkii qaldanaa ee 4.5 ee uu ku qasbanaa inuu ku soo xulo golahiisa wasiirada.
Inkasta oo uu isticmaalay nidaamka 4.5 hadane waxaan shaki ku jirin in xukumadiisu ay maanta mareyso heerkii ugu hooseeyey iyadoo ku dhaw bur bur hadeysanba iyadu is casili doonin inta aanba waqtigeeda la gaarin. culeysyada heysta xukumada Farmaajo ma yara waxaana ugu weyn 3 arimood.
1- Qibrad la'aan oo waxuu mesha ku yimid olole ay u galeen qaar ka tirsan golahiisa wasiirada oo hore ula soo shaqeyn jiray madaxweynaha hada talada haya ooay kal kaaliyaal u ahaayeen.
2- Waxaa golahiisa wasiirada ka tirsan ilaa 6 wasiiro oo aan ku xirneyn qabiiladooda amaba degaankii ay ka soo jeedaan oo ay nidaamka habqeybsiga 4.5ka ku heleen.
3- Waqtiga u harsan oo aad ugu yar iska daa in shacabka Somaliyeed la bad baadiyee waqtiga u haray waxuusan xitaa u saamaxeyn in ay uga fusho danahoodii u gaarka ahaa ragii qurbaha ka tagay iyo isaguba.
Waxaa kale oo ay xukumada Farmaajo xaqiijisay in shacabka badankiisu ay maanta u hamuun qabaan nidaamka federal systemka amaba maamul goboleedyada oo ay ugu danbeyn mudo 22 sano kedib ay qaramada midoobay xoojineyso halka ay shacabka Somaliyeedna ku dhiiran yahiin iney helaan maamul iyaga u gaar ah oo ay dhisteen wadadii ay doonaanba ha u maraane.
Siyaasadaha hada ka jira dalka iyo xiliga kala guurka ah ma ahan mid ay wax badan soo siyaadin karto xukumada Farmaajo tiiyoo wasiiradii looga fadhiyey iney degaanadooda iyo qabiilkoodaba ka dhaadhicyaan amaba ku soo xiraan TFGda ay iyagii iyo qabiilkoodii is fahmi waa ka dhax taagan yahay qaarkood maadama ay wadanka wax badan ka maqnaayeen iskabadaa in ayba TFG ku xiraane hadey iyaga iyo qabiiladooda is fahmaan ayey nasiib leeyahiin.
Kama hor dhaceyno wasiiradaasi hada waqtiga iyo xiligaan kala guurka ah ayaa shacabka iyo iyaga istusin doona hadeysanba iyagu is garan xili hore.
· admin on April 03 2011 03:05:23 · 0 Comments · 1934 Reads ·
14,614,498 unique visits